DAEWOO - Articles sur La Vérité 03 janvier 2009 -
Accueil > Publications > DAEWOO - Articles sur La Vérité 03 janvier 2009
Toa ireo ankolafin’olona maro izay nahalala ary nandà fa omena ny Koreana Tatsimo ny tany 1,3 tapitrisa hekitara eto Madagasikara, dia mitory ny Fanjakana ny diaspora malagasy mipetraka any Frantsa ary miantso ny tia tanindrazana rehetra any ampitan-dranomasina ny mba hifanampy amin’izy ireo.
Nanomboka ny zoma 2 jaonary 2009 hariva dia niely tamin’ireo tranonkala samihafa ny fivorian’ireo “diaspora” malagasy tao Paris any Frantsa, ny voalohan’ny volana janoary lasa teo. “Mitory ny Fanjakana malagasy amin’ny fanomezana ilay tany manana velarana 1,3 tapitrisa hekitara any amin’iny ilany atsinanan’i Madagasikara nomena ny Koreana Tatsimo izahay”, hoy izy ireo.
Naparitaka tamin’ny mpanao politika, mpandraharaha ara-toekarena, ireo masoivoho isan-tsokajiny, ireo mpiray ombon’antoka amin’i Madagasikara sy ireo maro hafa izany fanapahan-kevitra izany. Ny filohan’ny Vvsv, Daniel Ramaromisa dia nilaza fa “manao antso avo amin’ny Malagasy rehetra mipetraka any ampitan-dranomasina sy any amin’ny firenen-kafa ireo diaspora any Frantsa mba hanolo-tanana ka hanao sonia ny fitoriana ny Fanjakana amin’izao zavatra ataony izao”.
Efa an’arivony ny sonia voaangona ankehitriny. Araka ny voalazan’ilay taratasy ihany, dia “heverin’izy ireo ho fivarotana tanindrazana sy fanariana ny hasin’ny taranaka Malagasy izany fihetsika izany ka tsy ekeny”. Nanomboka omaly dia efa nieli-patrana manerana izao tontolo izao ity taratasy ity. Indrindra fa any “Europe” ary na dia ireo Koreana Tatsimo izay haka ity tany ity aza dia efa nahazo ny dika mitovy izany ihany koa. Lava dia lava ny zavatra voalaza ao anatin’ilay taratasy ka tsy ho voatanisa eto avokoa.